'तुच्छ गाली नगरौं, भोलि पनि मिलेरै जानुपर्ने छ' प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर १८ सोमबार |
काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हतारोमा थिए तर मुहारमा प्रसन्नता थियो । वाकपटुता देउवाको शक्ति आधार होइन । उनी छोटो र सूत्रमा कुरा गर्न रुचाउँछन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाझैं । त्यसमाथि निर्वाचनको मौन अवधि नजिकै आइसकेको सन्दर्भमा देउवा बढीभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्थे । त्यसैले मंसिर १७ गते धनगढीमा हामीले उनलाई सीधै विषय प्रवेश गराउने प्रश्नबाट संवादको थालनी गर्‍यौं । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले अन्तर्वार्ता छापेको छ ।
पुस्ता हस्तान्तरण ?
जरुर । सधैं हामीले चलाउने हो र ! सही समय आएपछि त्यो भइहाल्छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही थप भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लोकतान्त्रिक नेपालमा संक्रमणकालको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन हुँदै छ । नेपाली कांग्रेस मौसमी झार होइन, सती सालको रूख हो । हामी धेरै बोल्दैनौं तर बोलेका कुरा पूरा गर्छौं । अब विकासको युग थालनी गर्नेछौं ।
विपक्षी दलहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
हामी जुन लोकतन्त्रमा छौं, त्यसमा भोलिका दिनमा पनि मिलेरै जानुपर्ने हुन्छ । तुच्छ गाली-गलौज नगरौं । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं ।
यति भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले घडी हेरे । मैले बुझिहालें । म काठमाडौं फर्कन धनगढी एयरपोर्टतिर लागें, उनी डडेलधुरा । त्यसअघि मैले उनको एउटा तस्बिर आफ्नो मोबाइलमा खिचें । एक यस्तो मानिसको तस्बिर, जसले पञ्चायतका कठोर दिनमा नेविसंघबाट राजनीति थाल्यो । बीचको एक समयमा प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको भनेर आरोपित भयो । र, कालान्तरमा गणतन्त्रको संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने निर्णायक भूमिका उसको भागमा पनि नियतिले लेखेको रहेछ ।
संघीयता कसैले ठेक्का पारेर ल्याएको होइन, सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ : मन्त्री ढकाल
विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा संग्रहालयहरुको भ्रमणगरि चिनियाँ पर्यटनमन्त्री स्वदेश फिर्ता (तस्विर सहित)